Bilan waxay ahayd gabadhii aan adduunka ugu jeclaa, maantana waa gabadha aan ugu nebcahay “Qiso Xanuun Leh” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:05 am » Urur Gobaleedka IDAG ayaa maanta ka hadli Doona Arimaha Jubooyinka 6:02 am » Dhalinyaradii Dilka U geestay Askari Ingiriis ah ayaa la sheegay in ay Al-shabaab ahaayeen 4:51 pm » Magaalada Muqdisho oo 22 sano kadib lagu qabtay xuska sanad guurada ka soo wareegatay aas aaska Midowga Afrika “Daawo Sawirada” 4:28 pm » Raa’isal Wasaare Saacid oo markale si adag uga hadlay xaalada cakiran ee ka taagan Magaalada Kismaayo (Aqriso) 12:09 pm » Saraakiil ka socota Qaramada Midoobe oo maanta gaaray Magaalada Kismaayo 11:34 am » Madaxweyne Xasna Sheekh “Kaalintii aan u galnay Midowga Afrika waxay keentay, inay noo soo gurmadaan gabdho iyo wiilal Afrikaan ah” 11:20 am » Raggii ka dambeeyay dilkii Sheekh C/qaadir Gacamey oo maanta lagu xukumay xukun dil ah 9:43 am » Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Somaliya oo ku sugan Magaalada Riyadh “Daawo Sawirada” 9:31 am » Dagaal culus oo laga cabsi qabo inuu ka qarxo Magaalada Ceelbuur, markii uu gaaray Sheekh Xasan Daahir Aweys 9:23 am » Banaanbax ballaaran oo maanta markale ka dhacay Magaalada Muqdisho By: Mastar // Jun 13 2012 at 11:13 am // 3,241 Reads // Wararka Caalamka, Wararka Somalia Bilan waxay ahayd gabadhii aan adduunka ugu jeclaa, maantana waa gabadha aan ugu nebcahay “Qiso Xanuun Leh” Share Tweet
Qisadaan oo mid xanuun badan ah ayaa waxay dhex mareyn lamaane Somaliyeed oo lagu kala magacaabo Baashi iyo Bilan, Baashi ayaa ka sheekeeyay qisadaan oo mid xanuun badan ah.
Waxaan kamid ahaa Ardayadii lagu bilaabay Dugsiga Hoose dhexe sare ee Imaamu Shaafici, iskuulkaas ayaana kusoo dhameystay waxbarashayda ilaa heerka dugsiga Sare. Kadib waxaan kamid noqday dhalintii kubada cagta ee sida aadka ah looga yaqiinay Magaaladda Muqdisho. Maalin maal-maha kadib ah anigoo ka imid Stadium Moqdisho, xilligaas waxaan soo dhex lugeenaayey xaafadda Cali Kamiin, Nasiib wanaag waxaa arkay Bilan anigoo aanan garaneyn, Alle wuxu qadaray inaan afka la-galo misana aan ku dhaho walaaley waa oomanahay ee Biyo isii, halka ay iyana iga siisay, intii aan biyaha cabaayey ayaa waxaa i suurta gashay inaan ka qaato teleefanka gurigooda.
Xiriir fican ayaa ina dhex maray aniga iyo Bilan, kadib Bilan waxaa u soo bandhigay arrimo jaceyl, waa ay iga aqbashay. Jaceylkii aan u qabay Bilan waa uu sii xoogeystay, Bilan qudheeda waa ay i jecleyd. Xilli walbo oo aan ku ciyaaraayo garoonka Stadium Moqdisho Bilan waxay aheyd mid kasoo qeyb gasha, iyadoo ku qanacsanaan jirtay gacaliyaheeda oo ciyaaraayo.
Anagoo nolol macaan iskaga jirnay, qofba qofka kale uu ku qanacsan yahay, ayaa waxaa balan ku gaarnay inaan isguursano, bacdamaa aanu aad isku jacel nahay.
Maalin maal maha kamid ah ayaa hooyadee u sheegay inaan jeclahay gabar magaceedu yahay Bilan, hooyadee waa ay iga aqbashay, hooya-na waxay u sheegtay Aabe, Sidoo kale Aabe waa uu soo dhaweeyey jaceylkayga. Xilli ay kasoo wareegatay 3 Bilood ayaa Bilan keenay gurigayna oo ku yiilay xaafadda Geed Jaceyl, anigoo baray hooyadee.
Hooyadee ayaa waxay u sheegtay Bilan in’ay dhaweyn u imaan doonaan waalidkeeda, halka Bilan iyadoo faraxsan ay u sheegtay Aabaheyd. Odaygii marka hore wuu-farxay ileen gabadhiisu waxay u joogtaa waa guur. Dhanka kale Somali qabiil kama dhamaatee, odaygii baa-ku yiri Bilan ninka kusoo doonanaayo waa maxay Qabiilkiisa, waxay u sheegtay Qabiilka aan ka dhashay. Odaygii baa inyar yara-carooday, kuna yiri waan kasoo tashan doonaa. 1 cisho kadib isagoo aanan jawaab siinin gabadhiisa ayuu maalintii kale ku yiri Bilaney i dhageyso, ninka kusoo doonanaayo ama aad jaceshahay, Qabiilka uu dhashay iyo anaga waxaa inaga dhaxeyso waa Xabad, ee nagama dhaxeyso in gabar la’isisiiyo. hadaba reer ay xabad inaga dhaxeyso sideen gabadheeda u siiyaa. Bilan ayaa wax jawaab ah siinin Aabaheyd. Waa ay isoo wacday, waxay i sheegtay hadalkii uu Aabaheyd ku yiri. Murugo iyo Naxdin kadib, hadalkii ayaa u sheegay Hooyo iyo Aabe. Iyagoo igu qanciyey, in’ay i dooni doonaan Bilan.
2 cisho kadib Bilan ayaa la’iga doonay Aabaheyd, hase yeeshee waa uu nagu gacan seeray, wuxuu kaloo sheegay, in uu gabadhiisa siiyey Wiil uu adeer u yahay oo joogay Maraykanka.
Dhanka kale Bilan ayaa u soo bandhigay bacdamaa uu Aabaheyd iskukeen diiday inaan isla baxsano oo aan aadno, Addis Ababa ama Nairobi ama Kampala. Hase yeeshee Bilan ayaa waxay i sheegtay in’ay kasoo fikiri doonto, 25 cisho warkeeda maanan maqal arageeda iska daayee.
Anigoo yaaban oo aan ka dhamaan la’ahay fikir iyo murugo, ayaa go’aan ku gaaray inaan tago gurigii Bilan. Waan tagay balse sidee ku tagay? Waxaan ku tagay si xatooyonimo leh, waxaan arkay Bilan gabar ladhatay oo lagu magacaabo Kowsar, kowsar ayaan ku iri walaaley Bilan xagee u doonaa, waxay igu jawaabtay “Baashiyow walaalkey ayaa tahay, waan dareemi karaa dhibaatada ku heysato, balse maxaan ku sameyn karaa, Bilan maaha qof fahmi karta dhibaataada, waxaadna ogaataa Bilan in’ay aaday Abu Dubai”.
Intaas markaan maqlay ooyin iyo naxdin hor leh ayaa igu soo gudboonaatay.
Anigoo iska ooyaaya ayaa kasoo tagay Kowsar, habeenkaas waxaa dhaawac i geystay gaari Carolla ah, anigoo aanan kala garaneyn waxa aan ku sugnaa.
Ciil iyo caro fara badan kadib, waxaa arintii oo dhan u sheegay Hooyadee.
Hooyadee waxay aheyd Saxibkayga koowaad ee aan u sheegtay xaalad walbo oo aan ku suganahay, farxad ama murugo.
Hooyadee oo aad I jecleyd ayaa i soo bandhigtay laba arrimood oo kala ah,
1-Inaan Abu Dubai ku diro oo aad jaceylkaaga soo kasbato, 2-Inaan kuugu daro daro Gabar uu adeerka dhalay oo ku sugan degmada Hawl wadaag.
Hooyadey markii ay sidaasi igu tiri aad baan u farxay, durbadiiba waxaan doortay
In’ay i dirto Abu Dubai, ileen nin jaceyl ku taagan yahay baan ahayee,
3 bilood kadib waxa I suurta gashay inaan tago wadanka Emirate-ka, dhawr cisho markaan joogay, ayaa waxaa la’isheegay in Bilan ay aqal gashay, welibana ay guursatay wiil uu dhalay Abtigeyd.
Intaas markaan maqlay ayaa rajo dhigay, iyadoo ay igu xumaatay xaaladda, dhalinyaro badan oo aan isku asxaab aheyn, misa-na ku sugnaa Emirate-ka ayaa waxay igu qanciyeen inaan iska sabro, bacdamaa ay jaceylka tix gelin weyday Bilan.
Hada waxan ku suganahay Emirate-ka, waxaana joogaa ku dhawaad 8 bilood.
Bilan ayaa waxay noqotay gabadha aan ifka ugu jeclaa, ahna mida aan ifka ugu nebcahay. Baashi ayaa wuxu intaasi kusoo goobay jaceylkiisii ee uu u qaaday Bilan.
Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” Dumar masaeyr galay miyaan dejin karaa qisadaan waxay ku waa qiso maseyr sii Akhri Qiso Naxdin leh: Gabar Soomaaliyeed oo Sun ucabtay maseyr ay uqaaday Ninkeeda Qof aadan Wajigeeda Aqoon Maguursan Lahayd? Hadaba Sheekadani ku Cibrad Qaado. Gabar Soomaaliyeed oo sheegaty in ay Doonayso In ay gaal ah oo ay la tumato Quisadaan diiniga ah waa mid mudan in lagu cibro qaato hadaba akhri oo ku cibro qaado adna Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments